ज्ञानेन्द्रको राम धुलाईपछि युरोपबाटै मन्त्री भट्टराईले बल्ल मुख खोले, हेर्नुस बिस्तृतमा — Sanchar Kendra
ज्ञानेन्द्रको राम धुलाईपछि युरोपबाटै मन्त्री भट्टराईले बल्ल मुख खोले, हेर्नुस बिस्तृतमा
काठमाडौं । आफूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक अभियान्ता भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा भएको आ’क्र-मणबारे युरोप भ्रमणमा रहेका संस्कृति पर्यटन नागरीक उड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले बल्ल मुख खोलेका छन् । गत शनिवार चितवनमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा गएका शाहीमाथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताहरुले शाहीमाथि नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट गरेका थिए । उक्त नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट पछि गम्भीर घाइते इते भएको विषयमा यूरोप भ्रमणमा रहेका पर्यटन मन्त्री भट्टराईले मुख खोलेका छन् ।
मन्त्री योगेश भट्टराईले क्यानडाको मुख्य शहर टोरन्टोमा नेपाली सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कसैले पनि अराजकता मच्चाउन नहुने बताएका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको आक्रमणका विषयमा उनी आफूले सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी पाएको भन्दै कसैमाथि पनि कसैले अराजक शैलिमा आक्रमणमा उत्रन नहुने धारणा मन्त्री भट्टराई राखेका छन् । मन्त्री योगेश भट्टराईले शाहीमाथि आक्रमण प्रति संकेत गर्दै भने–‘लोकतन्त्रवादीहरुले अराजकतावादको घुँडा चढ्न सुहाउँदैन । यो सिंहमाथि सवार हुनमात्र हो । चढ्ने बेला जोखिम, चढिसक्दा जोखिम अनि झर्ने बेला झन जोखिम ।’
शाही ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानमा सक्रिए छन । उनले पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न तहमा भएका भ्रष्टाचार र बेरुजुहरुको भण्डाफोर गर्दै आएका छन् । यही क्रममा उक्त अभियानले चितवनको चौबिसकोटीमा खबरदारी सभा आयोजना गरेको थियो । नेपालका लागि नेपाली अभियानले आयोजना गरेको उक्त खबरदारी सभालाई नेकपाका कार्यकर्ताहरुले विथोलेका थिए । कार्यक्रम विथोल्ने कार्यमा नेकपा समर्थित विद्यार्थीहरुको ठूलो समूह सहभागी भएको थियो । उनीहरुले ‘राजावादीलाई कार्यक्रम गर्न दिँदैनौं’ भन्दै नारावाजी समेत गरेका थिए । विद्यार्थीहरुले कार्यक्रमको स्टेज भत्काउनुको साथै ब्यानर समेत च्यातिदिएका थिए । चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेका शाहीको अवस्थामा केही गम्भिरता देखएपछि उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
यस्तै ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा भएको आ’क्र-मणबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट वाइसिएल चितवनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। वाइसिएलले ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा भएको आ’क्र’म’णप्रति चितवन अध्यक्ष ईश्वर रेग्मीले शाहीलाई चितवनवासीले सम्झाएर पठाएको बताएका छन्। रेग्मीले गणतन्त्र-विरोधीलाई चितवनवासीले मन नपराउने हुँदा यो दुःखद घटना भएको बताए। शाही गणतन्त्रवादी युवाहरुको निशानीमा परेको उनको दाबी छ। ‘चितवन सचेत नागरिक बस्ने जिल्ला हो। यहाँका जनताले छिटो रियाक्ट गर्छन्,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र-विरोधिलाई मन पराउँदैनन्, त्यसैको उपज हो उनिमाथिको आ’क्र-मण।’
अध्यक्ष रेग्मीले शाहीमाथिको आक्र-मणमा नेकपा निकटका कुनै संगठनको संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन्। बिनाप्रमाण आफुलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी भन्ने, गालीगलौज गर्ने, चेतावनी दिने, मानमर्दन गर्ने लगायतका गतिविधि गर्ने छुट शाहीलाई नरहेको रेग्मीको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामी पनि भ्रष्टाचारको विरोधी हांै, समृद्धि, सम्मुनत विकसित नेपालका लागि लड्छौँ तर जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै, बोल्दै हिँड्ने अधिकार कसैलाई छैन।’ उनले यो घटना दुःखद् भएको टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि, सार्वजनिक स्थानमा एक व्यक्तिले तथानाम बोल्दै हिड्दा नजिकै भएका एक अर्का भद्र व्यक्तिले दुई झापड हानेर घर लखेट्ने काम गर्दा सही नै हुने उनको जिकिर छ।
यस्ज्ञातै नेन्द्र शाहीमाथि आक्रमण भएको दुई बित्न लाग्दा पनि संलग्नहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जाहेरी नआएको भन्दै पीडकको खोजीमा तत्परता नदेखाएको हो। शनिबार शाहीलाई चितवनमा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिएको थियो। चितवनका प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले पीडित पक्षबाट जाहेरी नआई प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए। जाहेरी नआई कसैलाई समात्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पीडित पक्षले जाहेरी दिएको छैन।’ आइतबार मल्लले संलग्नको पहिचान भइसकेको भन्दै चाँडै पक्राउ पर्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो पहिलेको भनाइ फेर्दै जाहेरी खोजेका हुन्।
कसैमाथि मारपिट हुँदा संलग्नलाई पक्रन जाहेरी पर्खनु पर्ने हो? भन्ने प्रश्नमा उनले ‘जाहेरीबिना कसैलाई कारबाही गर्न नमिल्ने’ बताए। उनले शाहीहरूको टोलीले कार्यक्रम गर्दा प्रहरीलाई जानकारी नदिएको बताए। ‘हामीलाई थाहै नदिई कार्यक्रम गर्दै हिँड्ने, अनि सुरक्षा पाइएन भन्ने?,’ उनले भने। आक्रमणमा घाइते भएका शाहीको वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। शनिबार भ्रष्टाचारविरूद्धको सार्वजनिक सभामा शाहीको टोलीलाई एक समूहले ब्यानर च्यातेर कार्यक्रम बिथोलेको थियो। त्यही सिलसिलामा पत्रकार सम्मेलन गर्न जाँदा शाहीलाई आक्रमण गरिएको थियो। एसपी मल्लले प्रहरीको टोलीले घटनाको अनुसन्धान भने गरिरहेको बताए।
यसैबीच नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ को ११ वैशाखमा जारी गरेको विज्ञप्तिको मस्यौदा स्वर्गीय नेता भरतमोहन अधिकारीले तयार पारेको खुलासा गरेका छन् । भरतमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानका तर्फबाट शनिबार आयोजित ‘‘भरतमोहन अधिकारी व्यक्ति एक : व्यक्तित्व अनेक’’ विषयक कार्यक्रममा नेपालले त्यस्तो खुलासा गरेका हुन् । ‘कांग्रेस र हामीले छुट्टाछुट्टै ड्राफ्ट दिएका थियौं, दरवारको पनि छुट्टै थियो । हामीले हाम्रो ड्राफ्ट अनुसार राजाको सम्बोधन भन्ने अडान राखेपछि ज्ञानेन्द्रको ९ बजेका लागि हुने भनिएको घोषणा राति ११ बजे भएको थियो’ नेपालले स्मरण गर्दै भने, ‘सुरुमा प्यारा देशवासीहरु र अन्तिममा श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् भन्नेबाहेक राजाले सबै हामी(एमाले)ले लेखेर दिएको पढे, त्यो मस्यौदा लेख्ने काम भरतमोहन कमरेडले गर्नुभएको थियो ।’
नेता नेपालले अधिकारीलाई बहुआयामिक व्यक्तित्वका रुपमा चर्चा गर्दै उनको व्यक्तित्वबाट सबैले शिक्षा लिनुपर्ने बताए । नेता अधिकारी अफ्ठेरो परेका बेलामा निकास दिने व्यक्तित्वको नेता भएको चर्चा गर्दै उनले सही विषयमा अडान लिने आवश्यकताअनुसार लचकता प्रदर्शन गर्नसक्ने राजनेता भएको चित्रित गरे । २०५१ सालमा अधिकारीले घोषणा गरेका लोकप्रिय बजेटकै कारण तत्कालिन एमाले स्थापित भएको चर्चा गर्दै नेपालले २०४७ सालको संविधानको मस्यौदाकारका रुपमा तथा दुई पटक संविधानसभा सदस्य र पटकपटकको मन्त्रीका रुपमा अधिकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । कार्यक्रममा नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, स्वर्गीय भरतमोहनकी पत्नी सबिता अधिकारी, परिवारका अन्य सदस्यहरु, नेताहरु अमृत बोहरा, युवराज ज्ञवाली, राधाकृष्ण मैनाली, कमल कोइराला, बेदुराम भुषाललगायत सहभागी थिए ।
त्यस्तै स्वघोषित सामाजिक अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चितवनमा अज्ञात युवाहरुले कु’टपि’ट गरेपछि भरतपुर महानगरपालिका मेयर रेणु दाहालले योजना बनाएर कु’टपि’ट गर्कान लगाएको भन्दै उनलाई सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज लेख्ने एकजना प’क्रा’उ परेका छन् । मेयर रेनुको चरित्र ह’त्या गर्ने किसिमका विद्युतीय सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेको आरोपमा पूर्वी चितवनका ३० वर्षीय पशुपति श्रेष्ठ पक्राउ परेको चितवन प्रहरीले जानकारी दिएको छ । शनिवारका दिन ज्ञानेन्द्र शाहीको कार्यक्रम स्थानीयवासीले बिथोलेपछि मेयर रेणुविरुद्द कतिपय व्यक्तिले उच्छृंखल, अपाच्य र अश्लीलता प्रदर्शन हुने भाषा प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेपछि प्रहरीले सक्रियता बढाएको प्रहरी प्रमुख दान बहादुर मल्लले जानकारी दिए । एसपी मल्लका अनुसार, मेयरविरुद्ध तथानाम लेख्ने एक दर्जन बढी व्यक्तिविरुद्द जाहेरी परेको छ किटानी जाहेरी परेका व्यक्तिलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।
चितवनमा दर्ता भएका सबै उजुरीलाई नेपाल प्रहरीको साइबर सेलमा पठाइने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसरी मेयर रेणुमाथि अपसब्द प्रयोग गरेर गालीगलौज गर्ने जिल्ला भित्र रहेका व्यक्तिलाई चितवनमै विद्युतीय अपराध अन्तर्गत कार्वाही अघि बढाउने र जिल्ला बाहिर तथा बिदेशमा रहेकाहरुलाई केन्द्रीय साइबर ब्यूरोले कार्वाही शुरु गरेको एसपी मल्लले जानकारी दिए । “विद्युतीय अपराध गर्ने जो कोहीलाई पनि कार्वाही गरिन्छ ।” मल्लले भने, “नेपाल बाहिर रहेकालाई पनि को कहाँबाट पोष्ट गरिरहेका छन, त्यो ट्रयाक गर्ने काम भइरहेको छ । सबैमाथि कार्वाही हुन्छ ।” आलोचना गर्ने अधिकार सबैको भएपनि सार्वजनिकरुपमा गालीगलौज गर्ने, चरित्रह’त्या गर्ने र मानमर्दन गर्ने छूट कसैलाई नभएको भन्दै अमर्यादित कुरा सार्वजनिक गर्नेमाथि प्रहरीले कार्वाही गर्ने मल्लले बताए । रेणु विदेशमा रहेको बेला नेपालमा उनीविरुद्ध तथानाम पोष्ट गरेपछि प्रहरीले कार्वाही गर्ने बताएको केही घण्टामा नै केही व्यक्ति पक्राउ परेका हुन । रेणुले भने अराजक तत्वहरुले आफूविरुद्द प्रचारबाजी गरिरहेको बताउँदै यस्ता तत्वविरुद्द बोल्न फुर्सद नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।
त्यस्तै नेता गगन थापाले चितवनमा ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको कुटपिटको घटना सरकार फासिस्ट हुँदै गएको संकेत भएको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारका समर्थकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्नेमाथि दिनदहाडै जाइलाग्नु गम्भीर घटना भएको बताए । को व्यक्ति को पात्र नहेरौं । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नेमाथि दिन दिनदहाडै ज्यान लिने गरी जाइलाग्छन् सरकारका समर्थकहरु । यसरी यो घटनापछि सरकारको विरोध गर्नेहरुतर्फ पनि लक्षित हुन सक्छ’ उनले भने । थापाले अघि भने ‘सरकार कानुन बनाएर स्वतन्त्रता खोस्दैछ । चितवन घटना सरकार फासिस्ट हुँदै गएको संकेत हो । युवासंघले लगाएको प्रतिबन्धपश्चात चितवनको एक कार्यक्रममा सहभागी जनाउन पुगेका शाहीमाथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताहरुले शाहीमाथि नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट गरेका थिए। शाहीको टाउकोमा चोट लागेको छ । उनलाई थप उपचारको लागि काठमाडौं ल्याईएको छ ।
यस्तै डा. भट्टराईले शाहीमाथि गरिएको आक्रमणमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता संलग्न रहेकोतर्फ संकेत गर्दै लोकतन्त्रमा भिन्न मत राख्नेलाई पिट्न नमिल्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एक सन्देश लेख्दै डा. भट्टराईले लोकतन्त्रमा प्रतिगामीलाई पनि विधिसम्मत ढंगले नियन्त्रण वा दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘हिजो मण्डलेले लोतन्त्रवादीलाई पिटे भनेर आज लोकतन्त्रवादीले भिन्न मत राख्नेलाई पिट्न मिल्दैन ! लोकतन्त्रमा प्रतिगामीलाई पनि विधिसम्मत ढंगले नियन्त्रण वा दण्डित गर्नुपर्छ,’ डा. भट्टराईले ट्वीटर सन्देशमा भनेका छन्, ‘निरंकुशता÷फासिवाद र लोकतन्त्रबीचको मुख्य अन्तर यही हो ! के हाम्रा कमरेडहरु सामाजिक फासिवाददति अन्मुख भएकै हुन् ?
यस्तै समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको आक्रमणले पञ्चायती शैलीको झल्को दिएको बताएका छन् । बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा नेता राईले भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता शाहीमाथि शनिबार चितवनमा भएको आक्रमणले आफूलाई पञ्चायतमा भएको आक्रमणको सम्झना गराएको बताए । भ्रष्टाचार र घुसखोरी वर्तमान सरकारका पालामा बढेको आरोप लगाउँदै उनले यसको न्यूनीकरण नभए जनता निरास भएर सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले पार्टी सरकारमा रहेको भएपनि सरकारका गलत कार्यको विरोध गर्न आफूहरुलाई कुनै नैतिक संकट नभएको पनि बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रण नगर्न नसके त्यसले लोकतन्त्रलाई असर पुग्ने चेतावनी दिए ।
नेपाली कांग्रेसले तनहुँमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालमाथि नेकपाका कार्यकर्ताद्वारा आक्रमण गर्न खोजेको घटनाको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेकपाका कार्यकर्ताहरुले रुख ढालेर बाटो अवरुद्ध गरेको र खुकुरी, भाला, लाठी, ढुंगा, वियरका बोतलसहित मण्डले शैलीमा आक्रमण गर्न खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । घटनाका विषयमा प्रहरी प्रशासनलाई समयमै जानकारी गराउँदा पनि प्रहरी प्रशासनले वेवास्ता गर्नु चिन्ताको विषय भएको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । फरक विचार र सिद्धान्त स्वीकार गर्न नसक्ने नेकपाका कार्यकर्ताको अधिनायकवादी चरित्र घोर निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नेकपाका कार्यकर्ताले एकपछि अर्को घटनाहरु दोहोर्‍याउँदै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्दै गइरहेको घटनाप्रति सतर्क रहन कांग्रेसले सबैलाई आग्रह गरेको छ । मण्डले शैलीमा हुने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण नगरे अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जनाएको छ। कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेपाली कांग्रेसलाई नजिस्क्याउन र आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिक दलको रुपमा प्रस्तुत हुन नेकपालाई चेतावनी दिएको छ ।